पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर १००% महिला विना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार नै हुन्छ – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/पुरुष बिना महिलालाई केही फरक पर्दैन तर १००% महिला विना पुरुषको जिन्दगी अन्धकार नै हुन्छ
पछिल्लो समयमा महिला दमन, हिं’सा र विभेदका बाबजुद पनि शक्तिमा आउन थालेका महिलाको शक्ति र क्षमतासँग डराएर संसारभर नै लिङ्गभेद हुँदै आएको हो । पुरुषविना महिलाले मात्र संसार चल्छ ? पुरुषविना महिलाको संसार अघि बढ्न सक्छ तर महिलाविना पुरुषको संसार अघि बढ्न सक्दैन । ईमेचि डटकम बाट ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाप्रति कति खुसि छिन रामकुमारी झाँक्री? यस्तो छ उनको प्रतिक्रिया
दीपाश्री निरौलाले गरिन यस्तो घोषणा !